परमाणु बम - विकिपिडिया
सन् १९४५मा जापानका नागासाकीमा झारिएका बमदेखि उत्पन्न भयङकर मेघको सदृश बादल - यी बादल बमका झरेका स्थानदेखि लगभग १८ किमी माथिसम्म उठेका थिए।
नाभिकीय अस्त्र वा परमाणु बम एउटा विस्फोटक युक्ति हो जसको विध्वंशक शक्तिको आधार नाभिकीय प्रतिक्रिया हुन्छ। यो नाभिकीय संलयन (nuclear fusion) वा नाभिकीय विखण्डन (nuclear fission) वा यी दुइटै प्रकारको नाभिकीय प्रतिक्रियाहरूका सम्मिलनदेखि बनाउन सकिन्छ। दुइटै नैं प्रकारका प्रतिक्रियाहरूका परिणामस्वरूप केही सामग्रीदेखि भारी मात्रामा उर्जा उत्पन्न हुन्छ। आजको एउटा हजार किलोदेखि थोरै ठूलो नाभिकीय हथियार यति उर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ जति धेरै अरब किलोका परम्परागत विस्फोटकहरूबाट उत्पन्न हुन सक्छ। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार (weapons of mass destruction) भनिन्छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा अधिक शक्तिशाली विस्फोटक, जो प्रयुक्त भएको थियो, त्यसको नाम 'ब्लकबस्टर' (blockbuster) थियो। यसको निर्माणमा तबसम्म ज्ञात प्रबलतम विस्फोटक ट्राईनाइट्रीटोलीन (TNT)को ११ टन प्रयुक्त भएको थियो। यस विस्फोटकदेखि २००० गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम थियो जसको विस्फोट टी. एन. टी.का २२,००० टनका विस्फोटका बराबर थियो। अब त प्रथम परमाणु बम भन्दा अधिक शाक्तिशाली परमाणु बम बनेका छन्।
पहिलो पटक गरिएको परमाणु बिखण्डन (अणु) बमको परिक्षणमा लगभग २०,००० tons of TNT (८४ टेराजूल). बराबरको उर्जा उत्सर्जन भएको थियो। पहिलो ताप परमाणु (हाइड्रोजन) बमको परिक्षणमा लगभग The first thermonuclear ("hydrogen") bomb test released energy approximately equal to १० मिलियन tons of TNT (४२ पेटाजूल) टन टिएनटि उर्जा उत्सर्जन भएको थियो। परमाणु बममा १० देखि ५० मेगाटन (जार बम्बामा) टिएनटी बराबरको परमाणु हतियार हुन्छ।
२ हाइड्रोजन बम
परमाणु बममा विस्फुटित हुनेवाला पदार्थ यूरेनियम वा प्लुटोनियम हुन्छ। यूरेनियम वा प्लुटोनियमका परमाणु विखंडन (Fission) देखि नैं शाक्ति प्राप्त हुन्छ। यसका लागि परमाणुका केन्द्रक (nucleus)मा न्यूट्रन (neutron)द्वारा प्रहार गरिन्छ। यस प्रह्योरदेखि नैं धेरै ठूलो मात्रामा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रमलाई भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन (nuclear fission) भन्दछन्। परमाणुका नाभिकका अभ्यंतरमा जो न्यूट्रान हुन्छन् उनैदेखि न्यूट्रान मुक्त हुन्छन्। यी न्यूट्रन अन्य परमाणुहरूमा प्रह्योर गर्दछन् र उनीसित फेरि विखंडन हुन्छ। यी फेरि अन्य परमाणुहरूको विखंडन गर्दछन्। यस प्रकार शृङ्खला क्रियाहरू आरम्भ हुन्छन्। परमाणु बमको अनियन्त्रित शृङ्खला क्रियाहरूका फलस्वरूप भीषण प्रचंडताका साथ परमाणुको विस्फोट हुन्छ।
यूरेनियमका धेरै समस्थानिक ज्ञात छन्। सामान्य यूरेनियममा ९९.३ प्रतिशत यू-२३८ (U-२३८) र ०.७ प्रतिशत यू-२३५ (U-२३५) रहन्छन्। यू-२३८को विखंडन उतनी सरलतादेखि हुँदैन जति सरलतादेखि यू-२३५को विखंडन हुन्छ। यू-२३५मा यू-२३८को अपेक्षा तीन न्यूट्रान कम रहन्छन्। न्यूट्रनको यस कमीका कारण नैं यू-२३५को विखंडन सरलतादेखि हुन्छ।
अन्य विखंडनीय पदार्थ जो परमाणु बममा काम आउँछन् ती यू-२३३ र प्लुटोनियम-२३९ छन्। परमाणु विस्फोटका लागि विखंडनीय पदार्थको क्रान्तिक संहति (critical mass) आवश्यक हुन्छ। शृङ्खला क्रियाका चालू गर्नका लागि क्रान्तिक संहति न्यूनतम मात्रा हो। यदि विखंडनीय पदार्थको मात्रा क्रान्तिक संहतिदेखि कम छ त न्यूट्रान केवल धुर्रधुर्र गरता रह्नेछ। मात्राका बिस्तारै बढाउनुले एउटा समय यस्तो अवस्था आएगी जब कमभन्दा कम एउटा उन्मुक्त न्यूट्रन एउटा नयाँ परमाणुमा प्रह्योर गर्न त्यसका विखंडन गर्न द्नेछ। यस्तो स्थिति पुगनमा विखंडन क्रिया स्वत: चलने लाग्दछ। क्रान्तिक संहतिको मात्रा गोपनीय हो। जो राष्ट्र परमाणु बम बनाउँदछन् ती नैं जान्दछन् र अर्कालोई बतलाँदै छैन।
यदि यू-२३५को क्रान्तिक संहति २० पौण्ड छ त दस दस पौण्ड दुई जग्गा लेनाले शृङ्खला क्रिया चालू हुनेछैन। २० पौण्डलाई एउटा साथ लेनाले नैं शृङ्खलाक्रिया चालू हुनेछ। शृङ्खलाक्रियामा न्यूट्रनको संख्या ठूलो शीघ्रतासित बढ्दछ।
परमाणु बममा विखंडनदेखि यूरेनियम र त्यसलाई निकटवर्ती अन्य पदार्थहरूको ताप ठूलो शीघ्रतासित माथि उठ्दछ। धात्विक यूरेनियम ठूलो ऊँची दाब र तापमा तापदीप्त ग्यासमा परिणत हुन जान्छ। विस्फोटक पिण्डको ताप १०,००,००,०००° से.सम्म उठ जान्छ। इतने ऊँचे तापमा यूरेनियमको थापी (tamper) हट जान्छ। तब सारा पिण्ड ठूलो प्रचंडतादेखि विस्फुटित हुन्छ। परमाणु बमका विस्फुटित भएमा आधात तरङ्गहरू (Shock waves) उत्पन्न हुन्छन् जो ध्वनिको गतिदेखि पनि अधिक गतिदेखि चारहरूतर्फ फैल्दछ। जब परमाणु बमलाई पृथ्वीतलका माथि विस्फुटित गरिन्छ त तरङ्गहरू पृथ्वीतलदेखि टकराएर माथि उठ्दछन् र नया आघात उत्पन्न गर्दछ जो माथि र तल तीव्रतादेखि फैल्दछ। बम स्फोट (Bomb blast)को केन्द्र तत्काल तप्त भएर निर्वात उत्पन्न गर्दछ। निर्वात भरनका लागि आसनजीकको ठण्डी हवाहरू दौड्दछ। यस प्रकार परमाणु बमदेखि घरहरूमा आघात पडनाले ती टु्ट्छन्।
विस्फोटी यूरेनियम अन्य तत्वहरूमा बदलिन्छ, त्यो भन्दा रेडियो ऐक्टिवेधी किरणहरू निकलेर जीवित कोशिकाहरूलाई आक्रान्त गर्न तिनलाई नष्ट गर्न दिन्छन्। बमको विनाशीकारी कार्य (१) आघात तरङ्गहरू, (२) वेधी किरणहरू तथा (३) अत्यधिक ऊष्मा उत्पादनका कारण हुन्छ।
हाइड्रोजन बम[सम्पादन गर्ने]
हाइड्रोजन बम परमाणुबमको एउटा कुन ्म हो। हाइड्रोजन बम वा एच-बम (H-Bomb) अधिक शक्तिशाली परमाणु बम हुन्छ। यसमा हाइड्रोजनका समस्थानिक ड्यू टीरियम (deuterium) र ट्राइटिरियमको आवश्यकता पर्छ। परमाणुहरूका संलयन गर्न (fuse)देखि बमको विस्फोट हुन्छ। यस संलयनका लागि ठूला ऊँचे, ताप, लगभग ५००,००,०००°सेको आवश्यकता पर्छ। यो ताप सूर्यका ऊष्णतम भागका तापसित धेरै अग्लो हो। परमाणु बम द्वारा नैं यति अग्लो ताप प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जब परमाणु बम आवश्यक ताप उत्पन्न गर्दछ तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित (fuse) हुन्छन्। यस संलयन (fusion)देखि ऊष्मा र शक्तिशाली किरणहरू उत्पन्न हुन्छन् जो हाइड्रोजनलाई हीलियममा बदल दिन्छन्। १९२२ ई.मा पहिला पहल ठेगाना लागेको थियो कि हाइड्रोजन परमाणुका विस्फोटसित धेरै अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुन सक्छ।
१९३२मा ड्यूटीरियम नामक भारी हाइड्रोजनको र १९३४ ई.मा ट्राइटिरियम (ट्रिशियम) नामक भारी हाइड्रोजनको आविष्कार भयो। १९५० ई.मा संयुक्त राज्य अमरीकाका राष्ट्रपति ट्रु मैनले हाइड्रोजन बम तैयार गर्ने आदेश दिए। यसका लागि १९५१ ई.मा साउथ कैरोलिनामा एउटा ठूला कारखाने स्थापना भएको हो। १९५३ ई.मा राष्ट्रपति आइजेनहाबरले घोषणाको थियो कि TNTका लाखौं टनका बराबर हाइड्रोजन बम तैयार भएको हो। १९५४ ई.मा सोवियत सङ्घले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरे। चीन र फ्रांसले पनि हाइड्रोजन बमका विस्फोट गरे छन्।
नाभिकीय भट्टी (Nuclear reactor)
HYDESim: High-Yield Detonatonation Effects Simulator Another Nuclear weapon simulator withafew more features based on the "The Effects of Nuclear Weapons", ३rd Edition, by Samuel Glasstone and Philip J. Dolan.
Effects of Nuclear weapons These tables describe the effects of various nuclear blast sizes. All figures are for १५ माइल/घंटा (२४ किमी/घंटा) winds. Thermal burns represent injuries to an unprotected person. The legend describes the data.
The Effects of Nuclear Weapons by Samuel Glasstone and Philip J. Dolan (१९७७ edn.) – an official text of the US government on weapons effects which is generally considered definitive
"The Nuclear Weapons Debate" - OneWorld.net's Perspectives Magazine, May २००५
Bulletin of the Atomic Scientists – Magazine founded in १९४५ by Manhattan Project scientists. Covers nuclear weapons proliferation and many other global security issues. See this page for comprehensive data on nuclear weapons worldwide.
५० Facts About U.S. Nuclear Weapons – Largest, smallest, number, cost, etc.
विकिमिडिया कमन्समा परमाणु बम सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
↑ "Atomic Power for War and Peace", Popular Mechanics (Hearst Magazines): 18–19, अक्टोबर १९४५।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=परमाणु_बम&oldid=1009022" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:१८, २३ मे २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।